ဗမာမွတ်စလင် | Dr Ko Ko Gyi's Blog
မော်လ၀ီ ပသီကျော်ဦး ရဲ့ ပသီသမိုင်းလေ့လာချက်များ »
ထို ပသီပန်းသေးတို့မှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် တရုတ်အနွယ်မွန်နိုင်ငံသားများ ဖြစ်ကြပါသည်။ ၄င်းတို့ ဘင်္ဂါလီများ ဟုတ်ကြပဲ မွန် မွတ်ဆလင်မ်များ ဖြစ်ပါသည်။
ဆက်လက်၍ အလောင်းမင်းတရားကြီသည် သန်လျင်မြို့ သို့ချီတက်တိုက်ခိုက် ပြန်ပါသည်။ သန်လျင်ကို အောင်မြင်၍ အိန္ဒိယ ပြည် မှ သင်္ဘောလေးစင်း ပါစစ်သားများ ကိုလည်း စစ်မှုထမ်းစေခဲ့၏။
(၁၀) နယ်ချဲ့ဗြိတိသျှ များမြန်မာနိုင်ငံကို စတင် ထိပါးလာစဉ် ရမူးပန်းဝါစစ်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ ယင်းစစ်ပွဲကို မြန်မာတို့နိုင်လိုက် ၍ ရန်သူများထံမှ အမြောက်ကြီး ၁ လက် ၊ သေနက် ၂၀၀ ကျော် ၊ နှင့် စစ်ပါရီကုလား သုံ့ပန်း (၂၀၀) ကျော် ရလိုက်ပါသည်။ ယင်းသုံ့ပန်းများကို ဘုရင့် နေပြည်တော် တောင်ဘက် (မြစ်သားချောင်းတောင်ဘက် ) မှာနေရာချထားပေးခဲ့သည်။
မင်းတုန်းမင်း လက်ထက်တွင် နိုင်ငံတွင်းနေ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များအတွက် သာသနာ့ကျင့်စဉ် အရ အဆုံးအဖြတ် ပေးနိုင်ရန် ကာဘူလ် မော်လ၀ီကြီး ကို ဓမ္မသတ် မှူးအဖြစ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခဲ့သည်။
မြန်မာသက္ကရာဇ် (၁၂၁၈) တပေါင်း လ ဆန်း ၃ရက် နေ့တွင်ရတနာပုံ မန္တလေးမြို့ တည်ရေးအတွက် လူပေါင်းများစွာ နှင့် မြို့ကွက်ရှင်းရာ ဗိုလ်မင်းထင်ရာဇာ ဦးစီး သော ပသီအမျိုးသား (၄၀၀) ကျော် ပါဝင်ခဲပါသည်။ သက္ကရာဇ် ၁၂၁၉ ၀ါခေါင်လဆန်း ၁၂ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့ သို့ မင်းနေပြည်တော်ပြောင်း ရွှေ့ရာတွင် လူမျိုးပေါင်းစုံကို အစုလိုက် နေရာချထားပေးပါသည်။
ပသီလူမျိုး ဟု သတ်မှတ် ထား သော အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအတွက် (၁)စစ်ကိုင်းတန်း (၂) ကန်းရိုးတန်း(၃) တောင်ပလူ(၄)အိုးဘို (၅) စကြာ နွယ် ဇင်(၆) ဂျွန်းအမြောက်တန်း(၇) ၀လီခန် ရပ်(၈) တိုက်တန်းရပ်ကွက် (၉) ကိုယ်ရံတော်ရပ် (၁၀) အချုပ်တန်း ရပ်ကွက်(၁၁)ကုလားပျို ရပ်ကွက် စုစုပေါင်း ၁၁ရပ်ကွက် သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါသည်။
Via “ဒေါင်း” (သို့) ဗမာမွတ်စလင်
shared from the FB Zaw Min Tun on Friday, May 11, 2012 at 1:32am ·
Tags: Asia, Aung San, Aung San Suu Kyi, Burma, Myanmar, National League for Democracy, Politics
This entry was posted on May 11, 2012 at 4:15 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.